Soo qaado kaarka xubinnimada
Qaado kaarka xubinnimada adeegyada dhallinyarada Helsinki albaabkana u furo hiwaayado iyo goobo la joogo
Kaarka xubinnimada adeegyada dhallinyarada ee Helsinki waa baasaboor VIP ah oo aad ku geli karto waxqabadyada goobaha dhallinyarada, munaasabadaha iyo hiwaayadaha Helsinki oo dhan. Kaarka xubinnimada oo loo yaqaan kaarka xubinnimada, waxaa la siiyaa dadka reer Helsinki ah oo dhan illaa iyo ay ka gaarayaan 29 sano, waxaad uga qaybaqadaan kartaa: ku taraarixidda looxad-shaagga, naadiga muusiga, naadiga farshaxanka ama waxaad ku joogi kartaa guriga dhallinyarada. Kaarka oo la tuso ayaa lagu heli karaa waxqabadyada oo dhan.
Inta lagu jiro deyrta 2020 ayeey dhammaan dadka ka weyn 13 sano waxay helayaan kaarka xubinnimada oo gebi ahaanba dijitaal ah. Dadka kayar 13 sano iskama diiwaangelin karaan adeegga sababo dhinaca ilaalinta macluumaadka ah dartood, laakiin waxay helayaan kaarka xubinnimada ee caagga ah iyo istiikarka sannad-dugsiyeedka ee sannadlaha ah. Cidna kuma wareejinayno macluumaadka xiriirkaada waxaadna markasta xaq u leedahay in aad hubiso dhammaan macluumaadyada adiga ku quseeya.
13–29 sano jir: Sidan ayaad u codsanaysaa kaarka xubinnimada ee dijitaalka ah
Iska diiwaangelin cinwaankan https://jassari.hel.fi oo buuxi foomka codsiga kaddibna u dir waalidkaa si ay u oggaaladaan. Kaarka xubinnimadu wuxuu shaqeynayaa marka ay waalidkaa aqbalaan codsigaada xubinnimada.
Gal adeegga kaddibna xaqiiji lambarkaada xubinnimada iyo macluumaadkaada shakhsiga ah.
Dadka kayar 13 sano: Sidan ayaad u codsanaysaa kaarka xubinnimada
Soo dejiso kaddibna daabac codsiga xubinnimada. Waxaad sidoo kale foomka ka heleysaa guriga dhallinyarada.
U soo celi guriga dhallinyarada foomka oo buuxa waalidkuna ay saxiixaan.
Kaarkaada xubinnimada iyo istiikarka sannad-dugsiyeedka waxaad heleysaa marka aad foomka soo celiso.
Hal kaar ayaa lagu helayaa fursado aan xad laheyn!
Kaarka xubinnimada waxaad uga qaybqaadan kartaa waxqabadyada guryaha dhallinyarada Helsinki. Kaarka waxaad fiidki ku geli kartaa diskooga iyo kafateeriada habeenki, waxaad ku joogi kartaa guryaha dhallinyarada, waxaad ku tababaran kartaa qolka kooxda muusikada, waxaad ku qaadan kartaa kooraska dhiijeeyga, waxaad ku codsan kartaa lacagta mashruuca, waxaad uga qaybqaadan kartaa xerada xagaaga ama waxaad ku qabanqaabsan kartaa munaasabad. Haddii ay jirto arrin ama hiwaayad aad xiisaynayso, weydii guriga dhallinyarada ee kuugu dhow. Fursaduhu xad ma malahan arrinta ugu wanaagsanna waa: in inta badan waxqabadyada guryaha dhalliyarada iyo goobaha shaqadu ay gebi ahaanba kuu yihiin lacag la’aan.
Waxqabadka adeegyada dhallinyaradu waa mid aan maandooriye laheyn. Macluumaadyada dheeraadka ah oo waxqabadkeena ku saabsan waxaad ka heleysaa bogaggeena internetka iyo Instagramka @Munstadi